हडताल फिर्ता | नेपाल इटाली डट कम
May 8, 2010 — nepalitaly
सरकारको राजीनामा माग्दै माओवादीले ६ दिनदेखि जारी राखेको आमहडताल शुक्रबार स्थगित गरेको छ । माओवादीको यस निर्णयलाई अन्य दल र नागरिक समाजले स्वागत गरेका छन् ।
‘जनताविरुद्ध जनतालाई भिडाउने षड्यन्त्र प्रतिगामीबाट भएको’ भन्दै कुनै राजनीतिक सहमतिविना माओवादीले हडताल स्थगित गरेको हो । आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम भने जारी रहने माओवादीले जनाएको छ । जेठ १४ अगाडि राजनीतिक गतिरोधको निकास ननिस्किए फेरि हडतालमा जानसक्ने चेतावनीसमेत माओवादीले दिएको छ ।
माओवादी स्थायी समितिको बैठक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासमा शुक्रबार बेलुकी बसेको थियो । बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागलाई यथावत् राख्दै हडताल फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । २४ घन्टाको अन्तरालमा माओवादी स्थायी समितिले गरेको यो दोस्रो निर्णय हो । हडतालमा साथ दिएकामा बैठकले सम्पूर्ण जनताप्रति आभार प्रकट गरेको छ ।
आमहडतालका कारण देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको थियो । उद्योग-व्यापार, कलकारखाना, शिक्षण-संस्था, वित्तीय संस्था सबै ठप्प थिए । देशका विभिन्न पेसागत संघ-संगठन, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हडताल फिर्ता लिन माओवादीलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । तर, माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म हडताल फिर्ता नलिने अडान लिइरहेको थियो ।
ठूलो आर्थिक र भौतिक तयारीका साथ माओवादीले गरेको आमहडताल कुनै उपलब्धिबिना फिर्ता भएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डले जनतामा पर्न गएको असुविधाका कारण हडताल स्थगित गरिएको बताए ।
‘बन्दका कारण जनमानसमा पर्न गएको असुविधा र यो असुविधाको नाजायज फाइदा उठाएर जनताका विरुद्ध जनतालाई प्रयोग गरेर भिडन्तको स्थिति निम्त्याएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर बन्दको कार्यक्रम स्थगित गरेका छौँ,’ शुक्रबार साँझ तीन घन्टा चलेको स्थायी समिति र जनआन्दोलन परिचालन समितिको संयुक्त बैठकको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने । बैठकमा आन्दोलनका क्रममा उपत्यकाको आन्दोलन केन्द्रको कमान्डिङ गरेको नेताहरूले आन्दोलन र यसबीचमा भएका घटनाक्रमबारे जानकारी गराएका थिए ।
माओवादीले कुनै राजनीतिक सहमतिका आधारमा आमहडतालको कार्यक्रम स्थगित नगरेको स्पष्ट पारेको छ । ‘हामीले बन्दको कार्यक्रममा पुनर्विचार गर्ने भनेर हिजो नै सोचेका थियौँ, यसमा अरू केही -कारण) छैन । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको संवेदनशीलतालाई बुझेर नै बन्द स्थगित गरेका हौँ,’ प्रचण्डले भने ।
माओवादीले १३ वैशाखमा ‘शान्ति र संविधान निर्माणको ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा गर्ने बाध्यात्मक विकल्प’ भन्दै अनिश्चितकालीन आमहडताल घोषणा गरेको थियो । हडतालका बीचमा पनि अन्य दलहरूसित सम्वाद र सहमतिलाई उसले जारी राख्यो, तर कुनै सहमति बन्न सकेन । कांग्रेस-एमालेलगायतका सत्तारुढ दलले सडकबाट माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने अडान लिइरहे ।
बढ्दो कुटनीतिक दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शान्तिप्रक्रियाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउन माओवादीले आमहडताल स्थगन गरेको माओवादीनिकट स्रोतले बतायो । शुक्रबारमात्रै अमेरिकाले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीलाई आमहडताल फिर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो ।
‘माओवादीले गरेको आमहडतालका कारण जनतालाई निकै गाह्रो भएको छ, र मुलुकलाई मुठभेडमा अग्रसर गराएको छ,’ दक्षिण तथा मध्यएसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रोबर्ट ओरिस ब्लेकले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘माओवादीलाई आमहडताल अन्त्य गर्न र सहज जनजीविका तयार गर्न आग्रह गर्छौं । ‘शान्तिका लागि दिगो उपाय सम्वाद नै हो भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’
यसअघि, भारत, अमेरिकालगायत विभिन्न देशका राजदूतहरूले माओवादी नेतृत्वलाई भेटेर आमहडताल फिर्ता लिन आह्वान गरेका थिए । शुक्रबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आमहडताल तत्काल फिर्ता लिई वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्न माओवादीलाई पुनः आग्रह गरेको थियो । माओवादी हडतालले जनताको आधारभूत अधिकार कुण्ठित हुनुका साथै अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना भएको मन्त्रिपरिषद्ले ठहर गरेको थियो । बैठकले माओवादी आन्दोलनमा संयमता अपनाएका जनता र सुरक्षाकर्मीलाई धन्यवाद पनि दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री शंकर पोखरेलले बताए । हडतालका क्रममा विभिन्न ठाउँका स्थानीय बासिन्दा र शान्तिर्‍यालीका सहभागीहरूमाथि माओवादी आक्रमण भएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले सरकार निकै संयम बनेको जिकिर गरे । ‘कुनै पनि बहानामा आन्दोलन हिंसात्मक नहोस् भन्ने चाहनाले सरकार अत्यन्त संयमित रूपमा प्रस्तुत भएको छ,’ पोखरेलले भने ।
माओवादीले घोषित तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम भने कायम रहने बताएको छ । यसअन्तर्गत शनिबार राजधानीमा आन्दोलनका १८ वटै केन्द्रमा जनप्रदर्शन र जनसभा तथा जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन र सभा गर्ने माओवादी निर्णय छ । यसबाहेक आइतबार उपत्यकामा सिंहदरबार घेराउ र जिल्लामा जनप्रदर्शन गर्ने माओवादीले जनाएको छ ।
मागमा अडिग छौँ
मई दिवसलगायत आन्दोलनका सबै कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गरेकामा सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ । हामीले आह्वान गरेको आमहडतालको कार्यक्रमले पर्न गएको असुविधा र त्यसबाट नाजायज फाइदा उठाएर जनताविरुद्ध जनतालाई प्रयोग गरी भिडन्त निम्त्याउने प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्रलाई मध्यनजर गरेर बन्दको कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरेका छौँ । हामीले चलाउँदै आएको तेस्रो जनआन्दोलनको कार्यक्रम भने जारी नै रहनेछ । १४ जेठअगाडि नै निकास निस्केन भने आमहडतालको कार्यक्रम पुनः अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
भोलि (आइतबार) जहाँ-जहाँ जनता आन्दोलनका लागि केन्दि्रत छन्, त्यहाँ १२ बजेदेखि प्रदर्शन र दुई बजे आन्दोलनका केन्द्रमा जनसभा हुनेछ । जनसभामार्फत हाम्रो आगामी कार्यक्रम
राखिनेछ । पार्टीका जिम्मेवार नेताबाट सम्बोधन हुनेछ । पर्सि (सोमबार) उपत्यकामा सिंहदरबार घेराउ र जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन गरिनेछ ।
राष्ट्र र जनताप्रति संवेदनशील बनेर बन्दको बारेमा सोच्नुपर्छ भनेर हिजो नै भनेका थियौँ । हामीले स्वतन्त्र ढंगले नै बन्द स्थगित गर्ने निर्णय लिएका हौँ । तर, यो सरकार विघटन भई राष्ट्रिय संयुक्त सरकार नबन्दासम्म समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरामा अडिग छौँ ।
कृष्णप्रसाद सिटौला, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य
आमजनताको दैनिक जीवन कस्टकर बन्दै गएको समयमा नेपाली जनताको चाहना र दलहरूको आग्रहमा माओवादीले अनिश्चितकालीन आमहडताल फिर्ता लिएर राम्रो काम गरेको छ । देशलाई बन्धक बनाउने र आमजनतालाई अनावश्यक दुःख हुने गरी उसले आयोजना गरेको आमहडताल फिर्ता गरेर मुलुकको समस्या वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न बाटो प्रशस्त गरेको छ । राजनीतिक दलहरूबीचको आपसी विश्वास, वार्ता र सम्वादबाट जारी राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्नुपर्दछ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले वार्ता र सम्वादलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । दलहरूबीचको परस्परको झगडा र आमजनतालाई दुःख दिएर समस्याको समाधान हुँदैन ।
छलफल जारी रहन्छ
प्रदीप ज्ञवाली, एमाले प्रचार विभाग प्रमुख
जनतामा परेको नकारात्मक प्रभावलाई ढिलै भए पनि महसुस गरेर आमहडताल फिर्ता गर्नु सकारात्मक हो । हामीले पहिल्यै भनेका थियौँ, शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न तय गरेका एजेण्डामा सहमति गरेर निकासमा पुगौँ । अब अरू आन्दोलनको पनि जरुरी छैन । वार्ता प्रक्रियाबाट सबै समस्या समाधान गर्न दलहरूबीच छलफल जारी राख्नुपर्छ ।
शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएको लडाकु समायोजन, वाइसिएललगायत माओवादीको अर्धसैनिक संरचनाको अन्त्य, पूर्ण रूपमा नागरिक पार्टीको रूपान्तरण र द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्तालगायत विषयमा ठोस सहमति भएपछि सरकारका विषयमा पनि खुला छलफल गर्ने हाम्रो बटमलाइन हो । अब त्यसैअनुसार वार्ता र छलफलको क्रम अगाडि बढ्छ ।
विनोद न्यौपाने/नयाँ पत्रिका
माओवादीको अनिश्चितकालीन आमहडतालको अन्तिम दिन राजधानीका विभिन्न ठाउँमा शुक्रबार झडप भएका छन् ।
माओवादी कार्यकर्ता र शान्तिसभाका सहभागीबीच सुन्धारा, रत्नपार्क, कुपण्डोल, सोह्रखुट्टेलगायतका ठाउँमा झडप भयो । बिहान वसन्तपुरमा आयोजित शान्तिसभामा सहभागी हुन आएका लतिलपुरका स्थानीयबासी र माओवादी कार्यकर्ताबीच कुपण्डोलमा केहीबेर झडप भयो । सभामा जान लागेकाहरूले बोकेको ब्यानर माओवादी कार्यकर्ताले खोसेपछि सुरु भएको झडपमा माओवादी सभासद् प्रेमबहादुर पुलामी र वाइसिएल कार्यकर्ता निरज राउत घाइते भएका छन् । झडपमा केही स्थानीयबासीसमेत सामान्य घाइते भएका छन् ।
शान्तिर्‍यालीसहित वसन्तपुर जान लागेको एक समूहमाथि माओवादी कार्यकर्ताले आक्रमण गरेपछि पाटन मंगलबजारमा पनि झडप भयो । शान्तिर्‍यालीमा सहभागी दुईजनालाई माओवादी कार्यकर्ताले कुटेपछि झडप सुरु भएको हो । झडपका क्रममा स्थानीयबासीले माओवादी सभासद् चढेको बा३च ९७२७ नम्बरको गाडीसमेत तोडफोड गरेका थिए । शान्तिसभामा जान लागेका पाँच जनाले पुल्चोकमा कुटाइ खाएको प्रहरी परिसर ललितपुरले जनाएको छ ।
यसैगरी शान्तिसभामा जाँदै गरेकाहरूलाई माओवादीले आक्रमण गरेपछि रत्नपार्कमा प्रहरी र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप भयो । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चार सेल अश्रुग्याससहित केही राउण्ड हवाई फायरसमेत गरेको थियो ।
शान्तिसभामा सहभागी हुनेहरू र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन बागबजार, रत्नपार्क, पुरानो बसपार्कलगायतका ठाउँमा गरी प्रहरीले करिब दर्जन सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । ती ठाउँमा दिउँसोसमेत प्रहरी र माओवादी कार्यकर्ताबीच झडप भयो । झडपमा आधा दर्जन माओवादी कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका तीनजनाको मोडल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । झडपमा दुई प्रहरीसमेत घाइते भएका छन् । प्रहरी जवान राजकुमार कार्की र सिर्जना केसीको हातमा चोट लागेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बसन्तपुरको शान्तिर्‍यालीमा सहभागी भएर फर्केकाहरूलाई सोह्रखुट्टेमा रहेका माओवादी कार्यकर्ताले समेत आक्रमण गरेका थिए । उनीहरूले डिआइजी पार्वती थापाको बा१झ ५५४४ नम्बरको गाडीसमेत तोडफोड गरे । दुई पक्षबीचको झडप बढ्दै गएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।
यसैबीच, बसुन्धारा चोकमा माओवादी र प्रहरीबीच केहीबेर झडप भयो । माओवादीले बोकेका लाठी र रड प्रहरीले खोसेपछि दोहोरो ढुंगा हानाहान भएको थियो ।
जोरपाटीमा पुनः झडप
जोरपाटीका स्थानीयबासी आमहडतालको प्रतिकारमा पुनः उत्रिएका छन् । शुक्रबार दिउँसो प्रतिकारमा उत्रेका स्थानीयबासी र माओवादीबीच पटक-पटक झडप भयो । नाराबाजी गर्दै जोरपाटीमा केन्दि्रत माओवादी कार्यकर्तालाई स्थानीयबासीले घरको छतबाट ढुंगा प्रहार गरेपछि झडप सुरु भएको थियो ।
झडप नियन्त्रणका लागि खटिएका चार प्रहरी दुवै पक्षको ढुंगा लागेर घाइते भएका छन् । झडपमा परी स्थानीय लक्ष्मण तामाङ घाइते भएका छन् । उनले आफू प्रतिकारमा उत्रेको नभई बिरामी बाबुलाई भेट्न अस्पताल जाने क्रममा झडपमा परेको बताए ।
कास्कीमा गोली चल्यो
कास्की/ माओवादी र प्रतिकार र्‍यालीबीच भएको झडपमा गोली चलेको छ । झडपमा माओवादीका १२ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये रमिला रेग्मी, रामबहादुर बयलकोटी, नवराज पौडेल, हेम तामाङ, ईश्वर रेग्मीलाई गोली लागेको माओवादी कास्कीले जनाएको छ ।　घाइतेहरूको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा उपचार भइरहेको छ । कञ्चटमा गोली लागेका घाइते रेग्मीको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
झडपमा गोली कसले चलायो भन्ने खुलेको छैन । तर, भण्डारढिकका स्थानीय वासु परियारको घरबाट गोली चलाइएको माओवादीले आरोप लगाएको छ । कास्की प्रहरीले भने स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन तीन सेल अश्रुग्यासमात्र प्रहार गरेको जनाएको छ ।
१८ वैशाखः मजदुर दिवस
– अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसमा माओवादीद्वारा राजधानीमा विशाल प्रदर्शन, देशभर विभिन्न कार्यक्रम
– राजधानीमा आयोजित सभामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार सहमतिबाट नढले सडकबाट नै ढाल्ने चेतावनी
– काठमाडौंमा ६ लाखभन्दा बढी र देशभर गरेर २५औँ लाखको जनप्रदर्शन भएको माओवादी दाबी
– सुर्खेत सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा आयोजित जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन जाँदै गर्दा बसको छतबाट खसेर सुर्खेत गुट-७ का ३५ वर्षीय सहवीर विकको निधन
१९ वैशाखः आमहडतालको पहिलो दिन
– देशभर सवारीसाधन, उद्योग, कलकारखाना शिक्षणसंस्था वित्तीय संस्था ठप्प
– छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन
– माओवादीद्वारा उपत्यकाका १८ ठाउँमा आन्दोलनको केन्द्र घोषणा
– पोलिटब्युरो सदस्यलाई कमान्डिङ जिम्मा
– उपत्यकामा आफ्नो आन्दोलनको जासुसी गर्न हिँडेको भन्दै दुई सैनिकलाई प्रक्राउ गरेर प्रहरीलाई बुझाइयो
२० वैशाखः आमहडतालको दोस्रो दिन
– आमहडताल शान्तिपूर्ण, जनजीवन प्रभावित
– दलहरूबीच वार्ता, तर सहमति भएन
– माओवादी कार्यकर्ता सडकमा गीत तथा नृत्यमा व्यस्त
– काठमाडौंका ६ ठाउँमा जनसभा
– माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलबीच बिहान एक घन्टा कुराकानी
– साँझ प्रचण्ड र कांग्रेस कार्यबाहक सभापति सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवालगायत नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग भेट
– एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र प्रचण्डबीच छलफल
२१ वैशाखः आमहडतालको तेस्रो दिन
– तीन दिनको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनपछि चौथो दिनदेखि आन्दोलन सशक्त बनाउने माओवादी पदाधिकारीको निर्णय
– माओवादीद्वारा चक्रपथ घेराउ । २७ किलोमिटर लामो काठमाडौंको चक्रपथ माओवादी कार्यकर्ताले हातमा हात समातेर घेरे । उनीहरूलाई अभिवादन गर्दै माओवादी शीर्ष नेेताहरू ट्रकमा घुमे । ँरातो चक्रपथ घेराउ अभियान’ नाम दिइयो ।
– मन्त्रीहरू बिहान चार, पाँच बजे नै प्रहरीको गाडीमा सिंहदरबार जान थाले
– माओवादी कार्यकर्ता र सतुंगलका केही युवाबीच झडप, ६ माओवादी कार्यकर्ता घाइते
– अनामनगर र मैतीदेवीमा दुई दर्जनभन्दा बढी पसल तोडफोड
– नेसनल टिभीका कर्मचारी राम थापामाथि कुटपिट
– अनिश्चितकालीन आमहडताल हिंसात्मक बन्दै गएको ठहर गर्दै प्रहरीले सुरक्षाव्यवस्था कडा पार्‍यो ।
२२ वैशाखः आमहडतालको चौथो दिन
– माओवादीद्वारा सिंहदरबार घेराउ
– आमहडताललाई मातृका यादवको समर्थन
– माओवादी नेता कार्की आन्दोलनमा ँभारतीय जनताको समर्थन’ जुटाउन दिल्ली प्रस्थान
– माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग नर्वेका राजदूत थोर गिस्लेन र कार्टर सेन्टरकी नेपाल प्रमुख सारह लेभिट्सोरको छुट्टाछुट्टै भेट
– भक्तपुरमा गोली चल्यो वाइसिएल र युथफोर्सद्वारा एक-अर्कालाई आरोप
– संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनद्वारा नेपालको शान्तिप्रक्रियासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत, नेपालमा आगामी १४ जेठसम्म संविधान जारी गर्न नसकिए गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने चेतावनी
२३ वैशाखः आमहडतालको पाँचौँ दिन
– शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आक्रमण भए प्रतिकार गर्न माओवादीद्वारा कार्यकर्तालाई निर्देशन
– आमहडताल खुकुलो पार्दै साँझ ६ देखि १० बजेसम्म बजार खोल्न दिने निर्णय
– माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भारतीय राजदूत र उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग अमेरिकी राजदूतको भेट
– देशका विभिन्न स्थानमा माओवादीको प्रदर्शनमा आक्रमण र प्रतिकार
– माओवादीद्वारा सशस्त्र प्रहरीका सइले चलाएको मोटरसाइकलको ठक्करले कलंकीमा मृत्यु भएका गणेश सुवेदी र एक्कासि बेहोस भई दाङमा मृत्यु भएका आफ्ना कार्यकर्ता रुद्रबहादुर केसीलाई जनआन्दोलनका सहिद घोषणा
– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त
– युरोपेली युनियन (इयू) द्वारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न तीन राजनीतिक दललाई सुझाव, संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्न पनि सुझाव
२४ वैशाखः आमहडतालको छैटौँ दिन
– शान्तिको कामनाका साथ वसन्तपुरमा विशाल सभा
– मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा आमहडताल तत्काल फिर्ता लिई वार्ता र सहमतिको माध्यमबाट राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य गर्न माओवादीलाई पुनः आग्रह
– माओवादी कार्यकर्ता र शान्तिसभाका सहभागीबीच सुन्धारा, रत्नपार्क, कुपन्डोल, बसुन्धारा चोक, सोह्रखुट्टे, जोरपाटीलगायतका ठाउँमा झडप
– माओवादीद्वारा आमहडताल स्थगित गर्ने निर्णय, अन्य दल र नागरिक समाजको स्वागत
« प्रतिकार र झडप
किन पछि हट्यो माओवादी ? »